कसरी वसन्त मा एक चेरी हेरचाह गर्न?
चेरी, साथै आलुबखडा संग स्याउ रूपमा, सधैं भिटामिन को एक लोकप्रिय स्रोत भएको छ। संस्कृति फूल यसको उत्कृष्ट दृश्य लागि चासो माली को छ, फल साथै रूख एक मह बोट छ रूपमा पकाउने मा व्यापक प्रयोग गरिन्छ। चेरी एक undemanding क्रप छलफल र सबै climatic वातावरण राम्रो तरिकाले बढ्छ छ। फल र बोट उत्पादकत्व गुणस्तर मा बस बराबर कुनै छ। को चेरी जस्तै परिणाम हासिल गर्न को लागि कसरी ख्याल गर्ने? यो थप छलफल गरिनेछ।
निरंतर बिना लगनशील हेरविचार fruiting को परिणाम हो चेरी प्रजातिहरू। , टीन देशमा, सुरक्षा किरा र रोगहरु, मल र छाँट्ने देखि hoeing: सबै नै फल को लागि एक बिरूवा हेरचाह कसरी निर्धारण। माटो को बढ्दो समय मार्फत वसन्त देखि चेरी को रूखहरू र ब्रश अन्तर्गत porous र सामा को सफा हुनुपर्छ। र अझै कसरी ठीक यो समयमा छ चेरी हेरचाह गर्न?
सुरक्षा संस्कृति ग्यारेन्टी गर्न, यो हेरविचार यस्तो विधि लागू गर्न आवश्यक छ:
सम्पूर्ण वसन्त महिनामा लगाए रूख वरिपरि माटो गीली गर्नुपर्छ। यी उद्देश्यका लागि, उत्पादक मल वा sawdust लागू हुन्छ। एउटै प्रक्रिया सम्भव पानी volatilization पृथ्वीमा सुरक्षा बनाउन, माटो पाप्रो र अक्सिजन को अभाव को जरा कवर हुनेछ।
यदि रोपण चेरी मा माटो राम्ररी fertilized, त्यसपछि युवा संस्कृति आवश्यक छैन खुवाउन पहिलो दुई वर्ष। युवा चेरी समय समयमा पानी, सामा छूट आवश्यक र जमीन loosen।
लेट सेप्टेम्बर, तपाईंले एक सर्कल रूखहरू मा जमीन उत्खनन गर्न आवश्यक छ। को बैरल गहिराई नजिकै 10 सेमी भन्दा कुनै ठूलो र निकट-wellbore मंडल मा गर्नुपर्छ - 20 सेमी।
कसरी पहिलो रोपण समयमा चेरी को बिरुवा हेरचाह गर्न? यो बोट पानी आवश्यक अक्सर छ। आदर्श सम्पूर्ण सिजन लागि 12 सिंचाई छ, तर मात्रा तातो गर्मी बढेको हुन सक्छ। यो पानी खन्याउन छैन राम्रो हुनेछ रूख चड्डी, र ड्रिप सिंचाई वा सिंचाई ditches सिंचाई विधि प्रयोग गर्नुहोस्। देशमा संरचना सुधार गर्न एउटा सानो recess गर्न loosened सर्कल टीन र पछि यसलाई सुक्खामा दिनु।
कसरी एक युवा चेरी हेरचाह गर्न? माटो मा खाद हालन को स्थिर साथै संस्कृति को खेती को लागि आवश्यक हुन सक्छ लक्षित लायक छ भने, प्रशस्त harvests रही। यो गर्न, माली जस्तै विधिहरू प्रयोग:
शरद ऋतु मा हरेक दुई वर्ष जैविक मल, overrotten मल, खाद हालन वा पीट प्रयोग गरिन्छ बनाउन आवश्यक खनाइ;
प्रारम्भिक वसन्त एक रूख वा यूरिया अमोनियम नाइट्रेट (नाइट्रोजनीय पदार्थ को औषधिको खुराक - 50-70 G) अन्तर्गत नै थप्न आवश्यक;
बढ्दो मौसममा चेरी लागू गर्न थप दुई जटिल वा fertilizing आवश्यक नाइट्रोजन मल संग (पहिलो बनाउन-अप तुरुन्तै फूल पछि गरेको छ, र दोस्रो - 15 दिन पछि);
थप चेरी स्वादिष्ट phosphorous 180-200 ग्राम वा पोटासियम पदार्थ जसको आदर्श वजन संग fertilized - 70-80 G
कसरी वसन्त मा एक चेरी हेरचाह गर्न? बाली क्रप गर्न समय रूपमा वर्ष को यो समय मा। बस मा एक ठण्डा दिन न्यानो राम्रो, तर के। यस रुखको रस प्रवाह सुरु हुँदा लिङगगको छाला काट्नु गर्न रूखहरू समय सम्म आवश्यकता हो, र अन्तस्करणले सुनिनु। युवा रूखहरू को मुकुट को गठन को लागि एक सानो बलियो लिन, मुख्य शाखा र तल को लम्बाइ साथ तिनीहरूलाई काट। कम स्प्राउट्स छाँट्ने बिना बाँकी छन्। निर्धारण केंद्रित मुद्दा 20 सेमी साधारण बिन्दु माथि undercut। भाग मध्यवर्ती तिनीहरूले प्रत्येक अन्य संग tangled छैन भनेर नियालेर, हटाइयो मार।
फल-बोकेका चेरी रूखहरू मा, जसको उमेर मात्र पातलो मुकुट बाहिर4अधिक वर्ष छ। यसलाई व्यापक sprouting सक्छ रूपमा, जवान रूखहरू काट्न हुँदैन। एक सामान्य नियम जस्तै, Thinning हरेक 2-3 वर्ष र सफा मात्र धेरै लामो लाभ गरेको छ।
को चेरी रूख कसरी कटौती गर्न
यो एक वार्षिक वृद्धि संग एक बिरूवा छ र यो लम्बाइमा शुट कम्तिमा 50 सेमी यदि रूखको हाँगाहरू को अतिरिक्त लम्बाइ काटन उपयोगी हुनेछ। लम्बाइ को 1/7 मा शाखा काटन राम्रो मुकुट बालाको निर्माण र buketnye मदत गर्नेछ। वार्षिक मार छोटो सकिन्छ पनि गर्मी समयमा। छैन कम 15 भन्दा सेमी को वार्षिक वृद्धि दर। कसरी चेरी हेरचाह गर्न र कहाँ राम्रो मार काटन सुरु गर्न जब कायाकल्प ट्रिम उत्पादन?
केवल गर्मी को सुरुमा ज्ञात हुनेछ - त्यहाँ के शाखा स्वस्थ र जो निर्जीव हो यो जाडो र लागि संस्कृति podmerzli एक संभावना छ किनभने चेरी वसन्त ट्रिम (एक रूख वा झाडी रूपमा) राम्रो छ, हतार छैन।
रोग र किरा विरुद्ध लडिरहेका
रूख रोगहरु र परजीवी को एक किसिम आक्रमण गर्न सक्छन् भने कसरी, एक चेरी हेरचाह गर्न? यो चिसो पछि आफ्नो कार्यहरू कदम गर्न प्रयास कीराहरू को एक किसिम बाट बोट जोगाउन सबै आवश्यक पहिलो हो। यस समयमा, तपाईं वसन्त मा सजिलै कुनै पनि रोग पकड गर्न सक्छन् किनभने चेरी को स्थिति, ध्यान दिएर निगरानी गर्न चाहन्छु। अक्सर, रूख जस्तै moniliosis र चेरी पात स्थान रूपमा रोगबाट पीडित। र यो अझै पनि विभिन्न beetles उपस्थिति द्वारा क्षतिग्रस्त गर्न सकिन्छ।
कसले संस्कृति हानि गर्न सक्छ
त्यहाँ सजिलै चेरी रूख, अर्थात् मा भित्र पस्नु गर्न सक्छन् जो धेरै परजीवी छन्:
Yellowtail, घेरा रेसमको लार्वा र Aporia Crataegi (जवान पात र तन्तु निल्न);
श्लेम लाग्एको sawfly लार्वा (बिगार्छ पिच);
चेरी weevils (मज्जा फूल र जामुन ruining);
फूल aphid (हर्जाना बालाको र पात);
चेरी mol (सुनिंनु समयमा दर्दनाक अन्तस्करणले)।
कसरी वसन्त चेरी हेरचाह र यो कीरा देखि रक्षा गर्न? रूख रक्षा गर्न, छिडकाव गरेको हुनुपर्छ। सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम azofoska र बरद समाधान हो। सबै भन्दा राम्रो परिणाम लागि, यो आफ्नो बैकल्पिक यी धन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, मृगौला समयमा खुलासा NPK स्प्रे गर्न सिफारिस गरिएको छ, र दुई हप्ता पछि छिडकाव गर्न पटक-पटक गर्छन् भएको बरद मिश्रण।
को चेरी रूखको हेरविचार लागि सबै प्रक्रियाहरु को सामयिक र उपयुक्त कार्यान्वयन एक स्वस्थ बढ्दै संस्कृति एक ग्यारेन्टी र उदार बाली प्राप्त छ।
कसरी महसुस चेरी हेरचाह गर्न
अब नजिक भएको डुब्नु यसको साधारण र जैविक गुण मा एक बिरूवा जस्तै। यो उनको साथ तर खूबानी, आलुबखडा र पनि आरु संग मात्र होइन hybridize गर्न सक्नुहुन्छ। तर सामान्य Prunus tomentosa संस्कृति संग पङ्क्तिबद्ध छैन। यो अझै पनि एक व्यक्ति प्रकारको mikrovishni छ।
चीन, त्यसैले त्यो दोस्रो नाम छ - - मातृभूमि चेरी महसुस चिनियाँ चेरी। यो एक Ornamental shrub रूपमा बढ्छ। रूस मा, यो विविधता गर्ने ठूलो बगैचा दृश्य सिर्जना र उसलाई नाम मातपाईंको दिनुभयो Michurin, धन्यवाद देखा छ।
चेरी किनभने पात, हाँगा, र कहिले काँही फल मा pubescence को भनिन्छ लाग्यो।
कसरी कुन हेरविचार एक प्रकारको आवश्यकता चेरी, हेरचाह गर्न? तर रूपमा मुश्किल रूपमा एकैचोटि जस्तो लाग्न सक्छ। यो रूख आत्म-सेचन गर्न सक्दैन, र त्यसैले यो धेरै प्रजातिहरू रोपेर गर्न आवश्यक छ। रोपण लागि सबैभन्दा अनुकूल समय - वसन्त को शुरुवात, को तन्तु अझै छन् खुला गर्दा। बस्ने गिरावट मा गरेको छ भने, यो सेप्टेम्बर भन्दा कुनै पछि लगाए गर्नुपर्छ। र बिरुवा यो वसन्त सम्म राम्रो prikopat हुनेछ, लेट खरिद।
मुकुट को केन्द्रीय भाग हरेक वर्ष पातलो आउट गर्न आवश्यक छ, र कतै 10-12 ठोस स्प्राउट्स छोड्नुहोस्। उल्लेखनीय महसुस चेरी फल पहिले नै तेस्रो वर्षमा सुरु गरिएको छ। देखि सही बोर्डिङ र उचित हेरविचार एक रूख हटाउन र फल4किलो गर्न सकिन्छ।
Sami जामुन धेरै रसदार छन् र एक मिठाई स्वाद र नाजुक स्वाद छ। चेरी को रंग गाढा रातो उज्ज्वल गुलाबी (रंग किसिम मा निर्भर गर्दछ) बाट आउनुहोस्।
Divorces चेरी pits, 2-3 सेमी को recesses मा, अक्टोबर रोपिन्छ जो लाग्यो। जवान बिरुवा वसन्त हुर्केका छन्।
अचम्मको बोट - फुच्सिया। ख्याल।
टमाटर रोपण लागि शुभ दिन
Extraordinarily उपयोगी बैजनी आलु
सही कसरी निर्धारण गर्न लैंडिंग बेला स्याउ रूखहरू बीचको दूरी?
प्रजातिहरू र प्रकार Melons को: फोटो र विवरण
ओछ्यान घाँस: तान्नु लड्न उपाय
पहुँच द्वारा फोल्डर: Windows7अधिकार र अनुमति कसरी पुनर्स्थापना
गुप्तांग जुम्रा - यो छुटकारा कसरी प्राप्त गर्ने?
माछा मार्ने, क्रिमीआ - समीक्षा, फोटो र मूल्यहरू
Nikolai Penkov - साँचो mhatovets
क्रिया को व्यक्तिगत अन्त। हिज्जे
बगैंचामा र छोराछोरीको लागि बगैचा बारेमा पहेली
फोर्ड कार: केहि मोडेलहरूको समीक्षा
कोठा तीन: अन्त्य हुँदै
विद्युत ऊर्जा स्रोत: विवरण, प्रकार र विशेषताहरु
कसरी रोजगार केन्द्र संग दर्ता